Taliye ciidan oo ka badbaaday qarax miino | KEYDMEDIA ONLINE
Taliye ciidan oo ka badbaaday qarax miino
Taliye ciidan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugnaa gobolka Gedo ayaa ka badbaaday qarax miino oo dhulka loogu aasay, xilli uu howlgal ku guda jiray.
BAARDHEERE, Soomaaliya - Qarax miino lagu aasay dhulka ayaa lala eegtay ciidamo uu horkacayo taliyaha ururka 49 aad guutada 10 aad qeybta 43 aad ee Xoogga dalka Gaashaanle dhexe Maxamed Dheer, taliyaha iyo ciidanka uu hoggaaminayay ayaa qaraxa lala beegsaday xilli ay ku sii jeedeen deegaanada ay howl-gallada ka sameeyeen.
Qaraxa oo ahaa miino ayaa lagu soo warramayaa in lala beegsaday gaariga taliyaha oo uu dhaawac ka soo gaaray miinada qabsatay gaarigiisa, waxaana ciidamadu ay fuliyeen qorshihii weerarka ee ahaa in ay burburiyaan xarumo ay kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen aaggaas, kuwaasoo dadaka tuulooyinka lagu dhibaateyn jiray.
Taliyaha ciidamada Maxamed ayaa ka badbaaday, isagoo uu soo gaaray dhaawac fudud kaasoo aan ka joojin qorshihii weerarka, xaaladdiisa caafimaad ayaa aad u wanaagsan sida aan ku heleeno warar lagu kalsoonaan karo oo ku dhaw-dhaw ciidamada.
Weerarada labada dhinac ee Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ayaa maalmahan soo kordhayay, waxaana saraakiil sar sare oo ka trisan ururka Al-Shabaab lagu dilay dhowr weerar oo dhacay horraanta bishan aynu ku jirno ee January.